Cash back 50% Unipin | Telenor Myanmar
တယ်လီနော ၅၀% အပိုဆု နှင့် Unipin Credits အတွက် ၁၀% ပြန်လည်ရရှိနိုင်မည့် အထူးအစီအစဉ်
Unipin မှ တယ်လီနော ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် In-Game Items များအတွက် အမြန်ငွေဖြည့်သွင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) Unipin အကြွေများ ဖြည့်သွင်းမှုအတွက် ၅၀% Cashback ပြန်လည်ရယူလိုက်ပါ။
၅၀% CashBack သုံးသလောက်ပေး တယ်လီနောအချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ၊ သုံးသလောက်ပေး တယ်လီနောအချင်းချင်း စာတိုပေးပို့ခြင်း ၊ သုံးသလောက်ပေး အင်တာနက် ဒေတာအသုံးပြုခြင်း - (၃) ရက်အသုံးပြုရန်
၁၀% Unipin Credits ဂိမ်းအတွက် ငွေဖြည့်ခြင်းများတွင် အသုံးပြုရန်
* Go to Unipin: https://www.unipin.com/
In-game items နှင့် currency များကို တယ်လီနောဖုန်းဘေလ်နှင့် ၀ယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
Top up Unipin Credits
5. အသုံးပြုသူအနေနဲ့ စာတိုနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်း ရွေးချယ်ရပါမည်။
6. အသုံးပြုသူမှလိုအပ်သည့် အချက်အလက်များထည့်သွင်းပြီး ငွေပေးချေမှုတွင် တယ်လီနောကို ရွေးပါ။
7. တယ်လီနောဖြင့် ငွေပေးချေမှုအတွက် အတည်ပြုပါ။
8. Unipin မှအောင်မြင်စွာဝယ်ယူပြီးကြောင်း အကြောင်းကြားစာရရှိပါမည်။
9. Customer မှ SMS ပြန်လည်လက်ခံရရှိပါမည်။
6. အသုံးပြုသူမှ ဝယ်လိုသည့် Unipin အကြွေပမာဏကို ရွေးချယ်ရပါမည်။
1. Customer မှ SMS လက်ခံရရှိပါမည်။
2. Unipin အကြွေများ ဖြည့်သွင်းရန် Menu ကိုသွားပါ။
3.Unipin အကောင့်သို့ဝင်ရောက်ရန် Login/Sign up ကိုနှိပ်ပါ။
4. အသုံးပြုသူအနေနဲ့ email (သို့) Facebook ကိုအသုံးပြုပြီး စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။
4. တယ်လီနောဖြင့် ငွေပေးချေမှုအတွက် အတည်ပြုပါ။
5. Unipin မှအောင်မြင်စွာဝယ်ယူပြီးကြောင်း အကြောင်းကြားစာရရှိပါမည်။
6. Customer မှ SMS ပြန်လည်လက်ခံရရှိပါမည်။
2. ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဂိမ်းအမျိုးအစားကိုရွေးပြီး In-Game Items များအတွက် အမြန်ငွေဖြည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ရယူရန်။
3. အသုံးပြုသူမှလိုအပ်သည့် အချက်အလက်များထည့်သွင်းပြီး ငွေပေးချေမှုတွင် တယ်လီနောကို ရွေးပါ။
တယ်လီနော Prepaid အသုံးပြုသူများအားလုံး ၅၀% အပိုဆု အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်နိုင်သည်။
အသုံးပြုသူများ အနေနဲ့ In-Game Items များအတွက် အမြန်ငွေဖြည့်သွင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) Unipin အကြွေများ ဖြည့်သွင်းမှုအတွက် https://www.unipin.com/တွင်ပြုလုပ်ရပါမည်။ .
ရရှိလာသည့် အပိုဆုကို သုံးသလောက်ပေးနှုန်းထားများ (သုံးသလောက်ပေး တယ်လီနောအချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း စာတိုပေးပို့ခြင်း နှင့် သုံးသလောက်ပေး အင်တာနက် ဒေတာအသုံးပြုခြင်း) အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
၅၀% အပိုဆု Cashback အပိုဆု၏ သက်တမ်းမှာ (၃)ရက် ဖြစ်သည်။
ဝယ်ယူသည့်အကြိမ်တိုင်းအတွက် ၅၀% အပိုဆု Cashback များရရှိပါမည်။
Unipin တွင်ဝယ်ယူမှုပမာဏ ၏ ၁၀% ကို အပိုဆု Unipin Credits အနေဖြင့်ပြန်လည်ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူသူ၏ Unipin အကောင့်ထဲထည့် ပေးမည် ဖြစ်သည်။
၁၀% Unipin Credits အပိုဆုကို တစ်ရက်တစ်ကြိမ်သာဝယ်ယူ အကျိုးခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
In-game items များ (သို့) Vouchers များဝယ်ယူရာတွင် မရရှိပါက https://www.messenger.com/t/UniPinMyanmar (သို့) https://www.unipin.com/supportကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Unipin ၅၀% Cashback + ၁၀% Unipin Credits ပြန်လည်ခံစားခွင့် အစီအစဉ်ဆိုတာဘာလဲ။
တယ်လီနော အသုံးပြုသူများ အတွက်အထူးအစီအစဉ် အနေနဲ့ Unipin မှ In-Game Items များအတွက် အမြန်ငွေဖြည့်သွင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) Unipin အကြွေများ ဖြည့်သွင်းမှုအတွက် ၅၀% Cashback ပြန်လည်ခံစားခွင့် အပြင် Unipin မှပေးတဲ့ အပိုဆု ၁၀% Unipin Credits ကို ပြန်လည် ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
Unipin ဆိုတာက ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဂိမ်းအမျိုးအစားတွေ အထူးသဖြင့် Mobile Legends စိန်တုံးတွေ အတွက် လွယ်လွယ်နဲ့ ငွေဖြည့်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် Steam Wallet ၊ ITUNES gift cards အစရှိတဲ့ ဘောင်ချာတွေကိုတွေကို တယ်လီနောဖုန်းငွေနဲ့ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၅၀% Cashback + ၁၀% Unipin Credits ရရှိဖို့ အတွက် ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ။
အသုံးပြုသူများ အနေနဲ့ In-Game Items ကို Unipin မှာဝယ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ https://www.unipin.com/
၅၀% Cashback က ဘယ်အချိန်ပြန်လည်ရရှိမှာလဲ။
အသုံးပြုသူများအနေနဲ့ Unipin မှ အောင်မြင်စွာဝယ်ယူပြီးနောက် ၂ဝမိနစ် မှ ၃ဝမိနစ် အတွင်း ၅၀% Cashback ပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
၅၀% Cashback + ၁၀% Unipin Credits ကို ဘယ်သူတွေပါဝင် နိုင်မှာလဲ။
တယ်လီနော Prepaid အသုံးပြုသူများအားလုံး ၅၀% အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်နိုင်သည်
၅၀% Cashback + ၁၀% Unipin Credits နဲ့ ဘာတွေ အသုံးပြုလို့ ရလဲ။
ရရှိလာသည့် ၅၀% Cashback အပိုဆုကို သုံးသလောက်ပေးနှုန်းထားများ (သုံးသလောက်ပေး တယ်လီနောအချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း စာတိုပေးပို့ခြင်း နှင့် သုံးသလောက်ပေး အင်တာနက် ဒေတာအသုံးပြုခြင်း) အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၁၀% Unipin Credits ဂိမ်းအတွင်း အသုံးအဆောင်များဝယ်ယူရာတွင်အသုံးပြုလိုရပါသည်။
Cashback ရဲ့ သက်တမ်း က ဘယ်လောက်လဲ။
၅၀% Cashback အပိုဆုကို (၃) ရက် ၁၀%
၅၀% Cashback အပိုဆုကို (၃) ရက်
၁၀% Unipin Credits ကို အကန့်အသတ်မရှိ အသုံးပြုနိုင်
Unipin Credits ကို အကန့်အသတ်မရှိ အသုံးပြုနိုင်
အကြိမ်များဝယ်ယူမှု အတွက် Cashback အကြိမ်များစွာ ရမှာလား။
Unipin တွင် အကြိမ်များစွာဝယ်ယူခြင်းဖြင့် ၅၀% Cashback အကြိမ်များစွာရယူနိုင်ခြင်း ၁၀% Unipin Credits အပိုဆုကိုတစ်ရက် တစ်ကြိမ်သာဝယ်ယူ အကျိုးခံစားနိုင်ခြင်း
နိုဝင်ဘာလ (၂၆) မှ ဒီဇင်ဘာ (၃၁)ရက် အထိ